Daaweynta 3 marka lagu daro daaweynta hypothyroidism - Hagaajinta caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah »Daaweynta 3 marka lagu daro daaweynta hypothyroidism - Hagaajinta caafimaadkaaga
Daaweynta 3 marka lagu daro daaweynta hypothyroidism - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Mawaxaad raadineysaa dawooyinka cudurka hypothyroidism? Waxaan had iyo jeer rabnaa inaan helno qaar ka mid ah dawooyinka fudud iyo kuwa dabiiciga ah si loo wanaajiyo tayada nolosheena loona dhammeeyo daaweynta hypothyroidism.
Maqaalka, waxaan kuugu soo bandhigaynaa sida saxda ah ee xulashooyinka aad raadineysay. Waxaad awoodi doontaa inaad horumariso wanaagaaga isla mar ahaantaana, la dagaallama astaamaha qaarkood sida daal, timo lumis, hurdo la’aan ama calool-fadhi.
Waa maxay hypothyroidism?
La qanjirka tayroodh waxay muhiim u tahay caafimaadka. Runtii, waa iyada soo saarta hoormoonada hagaajinaya dheef-shiidka. Waxay kaloo farageliyaan howlo badan oo hay'addeenna ah. Tani waa sababta calaamadaha hypothyroidism ay u saameeyaan qaybo badan oo jirka ah.
Hypothyroidism wuxuu dhacaa marka tayroodhku aanu firfircoonayn. Sidaas darteed, ma soo saarto hoormoono ku filan. Si loo garto dhibaatadan, dhakhtarku waa inuu sameeyaa baaritaanno dhiig ah hubi thyroxine (T4) iyo thyrotropin (TRH).
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira fikrado kala duwan oo ku saabsan waxa shahaadada loo arkaa inuu yahay cudur. Intaa waxaa sii dheer, mararka qaarkood, meelaha qaarkood ee ay dhibaatadu saameysey waxay caadi ku noqon karaan caadi ka dib in muddo ah.
Sidoo kale akhri: Jirdhiska tayroodh
Daaweynta ka hortaga hypothyroidism
Sidaas awgeed, dhakhtarku had iyo jeer waa ku nasan yahay tijaabooyinka dhiiga iyo sidoo kale astaamaha uu soo bandhigay bukaanku. Laga soo bilaabo halkaas, haddii uu u arko inay munaasib tahay, wuxuu qori doonaa dawooyin ay ku jiraan hoormoonnada tayroodh si looga adkaado ciilkiisa.
Waxa intaa u dheer raacida talo bixinta iyo qiimeynta dhaqtarka. waxaan raaci karnaa qaar ka mid ah talooyin wax ku ool ah oo ah kabka daaweynta hypothyroidism. Waxaan sidoo kale u tixgelin karnaa inay yihiin tallaabooyin ka hortag ah haddii aan u nugulno cudurkan qanjirka tayroodh.
Daaweynta dhameystirka ee hypothyroidism
Waa kuwaan qaar ka mid ah dawooyinka hypothyroidism ee la xaqiijiyay oo laga yaabo inay dhameystiraan daweynta daroogada.
1. Qiyaasta maalinlaha ah ee selenium
Dadka waaweyn, selenium-gu waxay badanaa ku ururtaa tayroodhka. Qanjidhadan ayaa u baahan selenium loogu talagalay dheef-shiid kiimikaadka hormoonnada iyo sidoo kale awooddeeda sare ee antioxidant.
Marka laga eego aragtida sayniska, daraasad ayaa muujineysa in macdantaani ay la xiriirto, kiiska hypothyroidism-ka autoimmuneCudurka Hashimoto) ku:
Hoos u dhigida heerarka kahortaga jirka
Horumar ka dhaca qanjirka tayroodhka ee ku shaqeeya “ultrasound”
Nolol tayo wanaagsan oo bukaan socodka ah
Dib-u-dhac ku yimaada ka-dillaaca jirka ee xaaladaha orbitopathy
Daraasad la mid ah ayaa soo jeedinaysa in la cuno selenium-ka dabiiciga ah. Si kastaba ha noqotee, ma aha inaan qaadanno kabtankan iyada oo aan la kormeerin xirfadle caafimaad. Runtii, xad-dhaafiddu sidoo kale waxay khatar ku tahay caafimaadka.
Taasi waa sababta aan kuugu soo bandhigno ikhtiyaar kale: nuts Brazil. Waa ku filan tahay in la cuno 2 maalin kasta si loo dammaanad qaado xaddiga selenium in jirkeenu u baahan yahay, iyada oo aan wax khatar ah u keenin caafimaadkeenna.
2. Dheeraadka Maca
Maca waa xidid asal ahaan ka soo jeeda Peru oo loo cuno cunno ahaan. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale laga helaa budo adduunka oo dhan, Thanks to dhismeedka tamarta leh iyo sida xakamaynta hormoonnada.
Macaanka jaallaha ah ayaa muujiyay wax ku oolnimada cudurrada tayroodh iyo xilliga caadada. Xididdani sidoo kale waxay noo keeni doontaa tamar looga hortago daalka, astaamaha caamka ah ee hypothyroidism.
Si aan u isticmaalno macaash ahaan, waxaan u baahan nahay inaan raacno tilmaamaha iyo qiyaasta daawada. Waa inaan xisaabta ku darsano inay kicineyso. Taasi waa sababta aan kugula talineyno inaad had iyo jeer ku bilow qiyaasta hoose oo si tartiib ah u kordhi.
3. Ka digtoonow waxyaabaha xayirmaya iodine
Si loo dhammaystiro daawooyinkayaga 'hypothyroidism', ma aha inaan kaliya bixinno nafaqooyinkan. Waa inaan sidoo kale tixgelinaa cuntada kuwaas oo waxyeello u leh oo ku dhici kara cunnadayada maalinlaha ah.
Waxaa jira cunnooyin aan ku xumaayn dadka caafimaadka qaba laakiin u fiicnaan kara dadka qaba hypothyroidism. Waxay ka kooban yihiin maadooyin loo yaqaan "goitrogens" oo horjoogsada nuugistaiodine, muhiim u ah caafimaadka qanjirka tayroodheer.
Soy iyo astaamihiisii (tofu, suugo, dabadhi, lecithin, iwm.)
Crucifers : broccoli, kareem, kaabash, dabocase iyo digaag
Miraha qalalan sida lawska, yicibta iyo lawska
Miraha qaar: strawberry, pear iyo miro guduud
Cassava iyo baradhada macaan
Iniin khardal le'eg
Si aad u aragto: Kale iyo maraq kareem maraqa kareemku ku badan yahay fiitamiinnada
Ugu dambeyntiina, iyada oo la adeegsanayo daawooyinkaan looga hortago hypothyroidism, waxaan xoojin karnaa daaweynta oo aan u aragnaa horumar nolosheena maalmeed. Isbeddello yar oo ku dhaca cunnadayada, waxaan ku horumarin karnaa shaqada tayroodh.
Hyperthyroidism: Furaha 5 ee Caafimaadka iyo Quraac buuxa
Si loo hagaajiyo dhibaatooyinka hyperthyroidism ma jiraan wax la mid ah sida laga bilaabo maalinta iyadoo ku biirineysa tabarruc wanaagsan oo iodine ah oo ay uga mahadcelinayaan ilaha dabiiciga ee buluuga ah Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/3-remedes-en-complement-du-traitement-de-lhypothyroidie/
Dhirta 4 si loo yareeyo gaaska caloosha
Daawooyinka Guryaha ee 7 Si Looga Dabiici Yareeyo Loo Yaqaano Cutaneous Mycosis - Hagaajinta Caafimaadkaaga